Archive du 22-juil-2021
Banky iraisam-pirenena sy Fanjakana Malagasy Voasonia ny fanampiana sy trosa 490 tapitrisa dolara
Notontosaina omaly teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha ny fifanaovan-tsonia famatsiana sy fampindramam-bola mitentina 490 tapitrisa dolara avy amin’ny Banky Iraisam-pirenena
Efa izay tokoa angamba no lova tamin’ireo lazaina fa “mpanjana-tany”! Sarisary! Sarisarina fahaleovantena, sarisarina fifanarahana koa no mbola hita hatreto mikasika ireo nosy manodidina,
Fampidiran-ketra -Kaominina Ampitatafika 30% ny taha tao anatin’ny enim-bolana voalohany
Tafiditra tao anaty fahasahiranana tanteraka ny ankamaroan’ny mponina tamin’ity taona vaovao 2021 ity. Ankoatra ny fahasahiranana nateraky ny fiakaran’ny vidim-piainana sy ny maintso
Fikasana hamono ny Filoha Rajoelina Malagasy maromaro sy commando Frantsay 2 voasambotra
Namoaka fanambarana ofisialy ny Mpampanoa lalàna ambony Rtoa Berthine Razafiarivony omaly alarobia 21 jolay, fa olona maromaro teratany Malagasy sy vahiny no nosamborina ny andron’ny talata 20 jolay teo.
Fitantanana ny tanànan’i Mahajanga “Hajao ny lalàna, ataovy ny fifidianana”
Voaporofo ary miharihary ny fahabangan-toerana na “vacance de poste” amin’ny fitantanana ny kaominina Ambonivohitr’I Mahajanga.
Marc Ravalomanana Nandray ny Mpiraki-draharaha Amerikanina
“Faly nandray an' Andriamatoa Tobias Glucksman, Chargé d'affaires Amerikanina ny tenako androany alarobia 21 jolay tolakandro.
Delegen’ny boriboritany eto Antananarivo Miofana momba ny lalàna mifehy ny fiterahana
Hatramin’ny omaly ary hifarana anio dia miofana momba ny lalana mifehy ny fiterahana ireo delegen’ny boriboritany eto Antananarivo renivohitra.
Pr Jonah Ratsimbazafy «Ny fahaizany no tokony hanendrena minisitra …”
Naneho hevitra momba ny resaka mafana amin’izao fotoana izao mikasika ny mety ho fanovana ny mpikamban’ny Governemanta ny Pr Jonah Ratsimbazafy tao amin’ny tambajotran-tserasera.
Raharaha mafampana miseho Sao mba fanodinana saim-bahoaka fotsiny ?
Ahitana toe-javatra hafahafa miseho miteraka resabe foana eto amin’ny firenena. Toa mifandraika hatrany amin’ny tontolo politika eto amin’ny tany sy ny Fanjakana.
Orinasa Ravinala Airports Nanome fitaovana ho an’ny “Pompiers” ao Fianarantsoa
Nanolotra fanampiana ara-pitaovana ho an’ny Mpamonjy voina na ny « Pompiers » ao amin’ny Kaominina Fianarantsoa Ambonivohitra tamin’ny alalan’ny Tale Jeneraliny Atoa Patrick Collard sy ny Tale QHSSSEMR
Filankevitry ny minisitra Nampiantso ny parlemanta hivory tsy ara-potoana
Noraisina nandritra ny filankevi-panjakana omaly alarobia 23 jolay ny didim-panjakana mikasika ny fampiantsoana fivoriana tsy ara-potoanan’ ireo parlemanta roa tonta dia ny antenimierampirenena sy ny antenimierandoholona,
Rodoben’ny mpanohitra Manasa ny herivelona rehetra rahampitso
Manoloana ny toe-draharaha misy eto amin’ny firenena dia nanapa-kevitra ny eo anivon’ny Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny demokrasia eto Madagasikara fa hanao fikaonan-doha nasionaly mikasika ny raharaha
Rafanomezantsoa Jean Nirina « Ny fampandraisana andraikitra ny fokonolona ihany no vahaolana »
Misy ny asa fampandrosoana mandeha eto amin’ny firenena raha araka ny fanazavan-dRafanomezantsoa Jean Nirina filoha nasionalin’ny HAFARI Malagasy no sady filoha tale jeneralin’ny orinasa mpitsabo Malagasy FITRAMA.